ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စစ်သွေး ငိုကြွေးစွန့်လွှတ်ခဲ့သော ကမ္ဘာ
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စစ်သွေး ငိုကြွေးစွန့်လွှတ်ခဲ့သော ကမ္ဘာ
“ကမ္ဘာလောကသည် ဘာလဲ” လို့ မေးကြကုန်၏ ။ တကယ်တော့ ‘ကမ္ဘာလောက’ ဟူသည် နင်တို့ ရွေးချယ် အာရုံခံနေမိပြီး ရွေးချယ်သိမြင်နေမိသည့် ကမ္ဘာသာ ဖြစ်သည်ဟု ငါတို့ဆရာ ဗုဒ္ဓရှင်တော်မှ ဖြေတော်မူခဲ့ပါသတည်း။ (ညီတော် ရှင်အာနန္ဒာ)
တစ်ခါက ယောဓဇီဝ ဟု အမည်ရသော စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ဦးသည် ဗုဒ္ဓအပါးသို့ ချဉ်းကပ် ဂါရဝပြုပြီးလျှင် မေးခွန်းတစ်ခု မေးခဲ့ပါသည် “ အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်တို့ စစ်သည်တော်ဟူသည့် အမျိုးမှာ စစ်ပွဲအတွက် မိမိအသက်ကို ပေးလှူထားကြသူများ ဖြစ်ပါသည်။ တပည့်တော်တို့ မျိုးရိုးစဉ်ဆက် သမုိုင်းတွင် ရှေးရှေးကတည်းက စစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ အစဉ်အဆက် ဆိုမိန့်ခဲ့သည့် စကား တပည့်တော်တွင် မှတ်သားကြားနာဖူးသည်မှာ တိုက်ပွဲတွင် ရွတ်ရွတ်ချွံချွံ တိုက်ခိုက်၍ ရန်သူ့လက်ချက်ကြောင့် အသက်ပေး ကျဆုံး ခဲ့ရသော စစ်သည်တော်တို့သည် ကျဆုံး သူတို့ သီးသန့်အထူး ပျော်စံရာ ဒေဝနတ်ဘုံတွင် ပြန်လည် မွေးဖွားလာရသည် လို့ ဆိုပါသည်။ အရှင်ဘုရားသည် ဤ အဆိုအမိန့် နှင့် စပ်၍ ကန့်ကွက်ဖွယ်ရာ ရှိပါသလား” ။
“ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ၊ တိုက်ပွဲတွင် ရွတ်ရွတ်ချွံချွံ တိုက်သော စစ်သည်ဟု (အပြင်ပန်းတွင်) နင်က ဆိုသော်လည်း (အခြေခံတွင်) စစ်တိုက်သူ၏ စိတ်သည် ယုတ်မာလျက် ရှိ၏။ ပျက်ပြားလျက် ရှိ၏ ။ သည်ကောင်တွေကို “ထိုးနှက်ပစ်၊ အပိုင်းပိုင်း ခုတ်ဖြတ်ပစ်၊ အစမကျန်အောင် ချေမှုန်းပစ်၊ အပြီး ဖျက်ဆီးပစ်၊ အသေသတ်ပစ်” ဟူသော ထိတ်လန့်စက်ဆုတ်သည့် ဗျာပါဒ တရားတို့သည် စစ်တိုက်နေသူ၏ အာရုံတွင် လွှမ်းမိုးလျက်ရှိ၏ ။ ဤအာရုံဖြင့် တိုက်ပွဲတွင် သေဆုံးသွားသောသူသည် ငရဲပြည်တွင် ပြန်လည်မွေးဖွားလာရ ပါလိမ့်မည်။ နင်တို့ မျိုးရိုးသမိုင်းက ရှေးစစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ အစဉ်အဆက် ဆုိုမိန့်ခဲ့သည့် ‘ရဲဘော်မသေ၊ သေသော် နတ်ရွာစံ’ အဆိုအမိန့်သည် မှားယွင်းသော အယူဖြစ်၍ ဤသို့သော မိစ္ဆာ အယူမှားမျိုးကို စွဲမယူအပ်။ ဤလောက၌ မိစ္ဆာ အယူမှားကို စွဲယူကုန်သော သူတို့သည် ရှိကုန်၏ ။ ထိုသူတို့ အတွက် နောင်ဘဝ လားရာမှာ ငရဲ နှင့် တိရစ္ဆာန် ဘုံနှစ်မျိုးသာ ရှိပေသတည်း”
ဘုရားရှင်၏ အဖြေကို ကြားသောအခါ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယုဓဇီဝသည် ရင်ဘတ်လှိုက်လဲ ငိုကြီးချက်မ ဖြစ်ပြီးလျှင် မြတ်စွာဘုရားကို လျှောက်သည်မှာ “ အရှင်ဘုရား၏ တရားစကားကြောင့် တပည့်တော် ငိုမိလေသည် မဟုတ်ပါ။ တပည့်တော် ငိုမိသည့် အကြောင်းမှာ ငါတို့မျိုးရိုး၏ ရှေးအစဉ်အဆက် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ခေါင်းဆောင် ဆရာသမားကြီးများ ဆိုသူတို့သည် သမိုင်း အစဉ်အဆက် ငါတို့ကို လှည့်ဖြားခဲ့သည်၊ လိမ်ညာခဲ့သည်၊ အယုံသွင်းခဲ့သည်ကို တပည့်တော် ခုမှသိရကောင်းလားဟု မချိတင်ကဲ ဖြစ်မိ၍ တပည့်တော်သည် ငိုကြွေးမိပါသည်၊ ယနေ့မှ စ၍ အရှင် ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရားသည် ဘုရား တပည့်တော်၏ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ရာ အဖြစ် လက်ခံတော်မူပါ”
“စစ်သွေး” လုို့ နာမည်ရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယုဓဇီဝ ငြိမ်းချမ်းသော ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ ကူးပြောင်းလာသည့် အားတက်ဖွယ် ဤပုံပြင်တွင် ကျွန်တော်တို့ ပရိသတ်သည် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စစ်သွေးက သူ့လူမျိုး၏ “စစ်သွေးကြွ ဝါဒ” နှင့် အတူ စွန့်လွှတ်လိုက်သော ပင်ရင်း ကိုးကွယ်ခဲ့သည့် မိခင် မိစ္ဆာဘာသာ မိစ္ဆာသာသနာကို သဲလွန်စ ရမိပါ သလား။
မှန်ပါသည်၊ ဗုိုလ်ချုပ်ကြီး နှင့် သူ့လူမျိုး (တစ်နည်းအားဖြင့် စစ်သွေးကြွ လူမျိုး) သည် တစ်သက်လုံး “မျိုးရိုး သမိုင်းစဉ်လာ ဝါဒ” (ဝါ) “ငါတို့ တစ်မျိုးသားလုံး၏ အနာဂါတ် လားရာသည် အသေအချာ ရှိခြင်း” ဟူသည့် မိစ္ဆာဘာသာ မိစ္ဆာသာသနာ ကို ကိုးကွယ်နေခဲ့မိပါသည် (Historicism) ။ ၄င်းလူမျိုး တစ်ခုလုံးသည် သူတို့ ကွက်ကွက်ကလေး သိနေသော “စစ်သွေးကြွအားလုံး မျိုးရုိုးစဉ်ဆက် မလွဲသေချာ နောင်ခါမှာ ချမ်းသာစံစားရသည့် သမိုင်းမြတ်ကြီး” ဟူသော လူမျိုးတစ်ခုလုံးကို သီးသန့် ခတ်နှောင်ထားသည့် အသိယုတ်ညံ့ အကျဉ်းထောင်ကြီးတွင် အကျဉ်းကျနေခဲ့ရ ပါသည်။ ၄င်း အသိမှား အယူမှား “ဒို့ မျိုးရိုး သမိုင်းစဉ်လာကောင်း ဝါဒ ” မိစ္ဆာထောင် အမှောင်မိုက်ကြီး တွင် တစ်သက်လုံး အကျဉ်းကျခံခံနေခဲ့ရာမှ ရုတ်ချည်းဆိုသလို မမျှော်လင့်ဘဲ လွတ်မြောက်လာသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဦးစစ်သွေးသည် သူ့ကို အမိုက်မှောင် ထောင်ဆိုးကြီးမှ မမျှော်လင့်ဘဲ လွတ်မြောက်လာအောင် ဆွဲထုတ် အလင်းပြခဲ့သည့် ကယ်တင်ရှင် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ ရှေ့တော်မှောက်တွင် သည်းသည်းလှိုက်လှိုက် နောင်တရ ငိုကြွေးမိသည်မှာ အဆန်းတကြယ်တော့ မဟုတ်ပါ။
တကယ်တော့ မြတ်စွာဘုရား မျက်မှောက်လက်ထက်တော်မှာ သမိုင်းစဉ်လာဝါဒ ကို စွန့်လွှတ်သွားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စစ်သွေး ရဲ့ ပုံပြင်ဟာ သမိုင်းစဉ်လာ ဝါဒ (Histoicism) ရဲ့ သော့ချက် သဘောတရားရေးရာတွေကုို ရှင်းပြဖို့ အကောင်းဆုံး ဥပမာတွေထဲက တစ်ခုဆိုလည်း ဟုတ်ပါတယ်။ အခု ဆက်လက်ပြီး ကျွန်တော် သည်ပုံပြင်ထဲမှာ ပါတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ သော့ချက် နှစ်ခုကို ရှင်းပြလိုပါတယ်။
ပထမ တစ်ချက်က ငါတို့အားလုံး အတွက် လောကနိဗ္ဗာန် (သို့) အနာဂါတ် သန္တိသုခ နိုင်ငံကြီး ဆိုတဲ့ “စိတ်ကူးယဉ် ကွက်လပ်” တစ်ခုကို ဖန်ဆင်းမှုဖြစ်ပြီး ဒါဟာ ဆိုရှယ်လစ်-ကွန်မြူနစ် ၊ ဖက်ဆစ်၊ အမျိုးသားရေး၊ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ စသော Totalitarianism လုံးစည်းလှုပ်ရှားမှု တွေရဲ့ “ရွှေ့လျားမှုဖြစ်စဉ်” တွေမှာ အရေးကြီးဆုံး ပဓာန လက္ခဏာတွေထဲက တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သည် ပထမ တစ်ချက် ဖြစ်တဲ့ စိတ်ကူးယဉ် ကွက်လပ် (fictional space) အကြောင်းကို နောက်စာတွေဖက်ကို ခဏရွှေ့ထားပြီး နောင်တော့ လုံးစည်းဖြစ်စဉ်တွေကို ပြောပြလာတဲ့အခါမှာ အသေးစိတ် ရှင်းပြပေးပါ့မယ်။ ခုနေခါမှာတော့ သည် စိတ်ကူးယဉ် ကွက်လပ်ဟာ ပေါ့သေးသေး မဟုတ်ဘဲ လူထုတစ်ရပ်လုံး လုံးစည်းစနစ်မှာ အရှိန်အဟုန် ပြင်းပြင်းနဲ့ တဟုန်ထိုး ပါဝင်လာအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်ကြောင်း၊ လူတွေရဲ့ စိတ်ကူးထဲကို ဘုရား (သို့) ဗုဒ္ဓနေရာမှာ အစားထိုး ဝင်ရောက်သွား နိုင်ကြောင်း၊ စာဖတ်ပရိသတ်ထဲမှ ဗုဒ္ဓဘာသာစာပေကို နက်နက်ရိူင်းရိူင်း လေ့လာထားသူတို့ အဖို့ဆို ‘စိတ်ကူးယဉ်ကွက်လပ်’ ဟာ ဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့ ဗြဟ္မဇာလသုတ် (စိတ်ကူးကွက်လပ်ထဲက နင့် ‘ဗြဟ္မာကြီး’ဟာလည်း ငါဘုရား လွှတ်တဲ့ ပိုက်ကွန်နဲ့ မလွှတ်ပါဘူး) ရဲ့ အချုပ်ပရိယာယ်နှင့် တစ်သဘောတည်း ဖြစ်ကြောင်း အကျဉ်းမျှ သိမြင်ထားရင် လုံလောက်ပါပြီ။
အခုစာမှာတော့ ကျွန်တော်တုို့ဟာ နောက် သော့ချက်တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ “သီလသမာကို အနာဂါတ်နှင့် စံပြု တိုင်းတာသတ်မှတ်သော ဝါဒ” ၊ အတိုချုပ်အားဖြင့် သီလစံထား အနာဂါတ်ဝါဒ (moral futurism) ကို ဆွေးနွေးပါမည်။ သီလစံထား အနာဂါတ်ဝါဒဟာ အင်မတန် ဆိုးပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၄င်း အနာဂါတ်ဝါဒ လွှမ်းမိုးခံလိုက်ရတဲ့ – ဆုိုရှယ်လစ်-ကွန်မြူနစ်၊ ဖက်ဆစ်၊ အမျိုးသားရေး၊ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ စသည့် – လုံးစည်းဝါဒ အားလုံးဟာ နောက်ဆုံးသတ်မှာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုတဲ့ ကြမ္မာဆိုးနဲ့ အဆုံးသတ်သွားရတယ် ၊ “အနာဂါတ်သာ သီလစံ” ဆိုတဲ့ အစွဲအယူဟာ နိုင်ငံသူတွေရဲ့ အသိအမြင်မှာ လာ လွှမ်းမိုးထားနေသရွေ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟာ မိမိမှာ ကျရောက်နေတဲ့ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ဆိုတဲ့ ကြမ္မာဆိုးကြီးကနေ ရုန်းထွက်နိုင်ဖို့ရာမှာ ရေမျှောကမ်းတင် ခဲယဉ်းလွန်းလှ တာကြောင့်ပါ။
သီလစံထား အနာဂါတ် ဝါဒကို နားလည်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ဦးစစ်သွေးရဲ့ ပုံပြင်ကို ကျွန်တော်တို့ ပြန်ကြည့်ကြပါစို့။ ဗုဒ္ဓ နဲ့ စကားမပြောမိခင် အချိန်ထိ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နဲ့ သူ့မျိုးရိုး (စစ်သွေးမျိုးရိုး) ဟာ “တစ်ဖက်ရန်သူကို ထိုးနှက်ခြင်း၊ ခုတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ချေမှုန်းခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ အသေသတ်ခြင်း၊ ရန်သူ့လက်နဲ့ ကျဆုံးရခြင်း” စတဲ့ ယုတ်မာအောက်တန်းကျလှတဲ့ သူသတ်ငါသတ် လုပ်ရပ်တွေကို အလုပ်ကောင်း ဆုိုပြီး စွဲယူနေပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကောင်းလွန်းမက ကောင်းမြတ်လှတဲ့ “နတ်ဖြစ်ရတဲ့ စည်းစိမ်ချမ်းသာ ဟူသော စံစားမှုကို (ငါတို့ စစ်သွေးမျိုးရိုးက) စစ်တိုက်သူတို့ဟာ နောက်ပိတ်ဆုံးမှာ မလွဲသေချာ ရကြတော့မှာ” ဆိုပြီး သူတို့ဟာ စွဲယူထားကြ ပါသည် ။ သူတို့ စွဲယူမိတဲ့ မိစ္ဆာ အယူမှားကို စာလေးတစ်ကြောင်းတည်း နဲ့ ငါတုို့ နည်းစနစ်တကျ အတိုချုံးကြည့် ပါစို့။
“လမ်းဆုံးပန်းတိုင်သည် လမ်းကြောင်းလုပ်ရပ်၏ တရားမျှတမှုကို ထောက်ခံရန် လုံလောက်သော ဆင်ခြေ ဖြစ်သည်”
ဗမာလိုကသာ ရှည်နေတာ။ အင်္ဂလိပ်လို ရေးမယ်ဆိုရင် တိကနဲ သုံးလုံးတည်းပါ - Ends justify means တဲ့ ။ “အနာဂါတ်မှာ အောင်မြင်မှု ပန်းတိုင်ကို ရယူနိုင်မယ်ဆိုရင် ငါတို့လုပ်တဲ့ နည်းလမ်းဟာ ဘာပဲဖြစ်နေနေ မှန်တာပါပဲ” လို့ ဆိုတာပါ။ ဒါကို ဒဿန နည်းစနစ်အားဖြင့် moral futurism - မျှော်လင့်ချိန်ရွယ်ထားသည့် အနာဂါတ်သည်သာ သီလသမာကို တိုင်းတာသည့် စံပေတံ ဖြစ်ခြင်း (ဝါ) သီလစံထား အနာဂါတ်ဝါဒ လို့ ခေါ်ပြီး ဤဝါဒသည် ကွန်မြူနစ်-ဆိုရှယ်လစ်၊ ဖက်ဆစ်၊ နာဇီ၊ အမျိုးသားရေး၊ မျိုးချစ်၊ မျိုးစောင့်၊ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ စသော (မင်းသား မျက်နှာဖုံးတွေ ဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း) အလုံးစုံသော လုံးစည်းဝါဒီ ဘီလူးအားလုံးရဲ့ ဖင်ခုထိုင်ရာ အဓိက ဆင်ခြေဆင်လက် ဘီလူး ဖင်ထိုင်ခုံကြီး ပါပဲ။
သည်မှာလည်း သီလစံထား အနာဂါတ် ဝါဒကို ထောက်ခံသူတွေဖက်မှ တွေးခေါ် ငြင်းခုံနိုင်သည့် အဓိက အချက်တစ်ခု ရှိပါသည်။
“သည်ဝါဒ ဖြစ်ထွန်းရင် စစ်အာဏာရှင် စနစ် ဖြစ်ထွန်းမယ်လုို့ နင်ကသာ ပြောနေတယ် ။ ဤဝါဒဟာ တချို့သူ - ဥပမာ စိတ်ကောင်း စေတနာကောင်း ရှိသူ အမျိုးသားရေး ဝါဒီများအတွက် သည်လောက် ဆိုးမယ် မထင်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ဟာ နောက်ဗိတ်ဆုံး လွဲကာမှလွဲရော အနာဂါတ် ဗမာပြည်မှာ အကောင်းဆုံး သီလသမာ တရားတွေ ပေါ်ထွန်းလာဖို့ စေတနာကောင်း နဲ့ ရည်ရွယ်ထားကြလို့ပါ”
သည် သက်သေတင်ချက်မှာ ပါတဲ့ စေတနာကောင်းဆိုတဲ့ အချက်ကို ကျွန်တော် ငြင်းဆုိုမနေတော့ ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အနာဂါတ်ကောင်းမှာ နေခွင့်ရတဲ့ ဘဝ - ဆိုပါစို့ ၊ နတ်ပြည် ဗြဟ္မာပြည် သို့မဟုတ်လည်း ပစ္စက္ခ မျက်မှောက်ဘဝမှာ မင်းကောင်းမင်းမြတ် အုပ်စိုးလို့ ဥစ္စာဓန ပေါကြွယ်ဝလာတဲ့ ဗမာပြည်ဟာ လက်ရှိ နိမ့်ကျနေတဲ့ သီလထက် များစွာကောင်းမွန် ပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ တတွေ ကြိုတင် ဆဝါးထားတတ် ကြတာဟာ ဓမ္မတာပါ။ ဗမာလူ့ဘောင်တွင် သာမန် ရပ်သူရွာသားတွေက အစ “ဓမ္မသည် အဓမ္မကို အဆုံးသတ်မှာ အောင်နိုင်စမြဲ” လို့ အဖိနှိပ်ခံရသူ အချင်းချင်း တစ်ဦးကို တစ်ဦး အားပေးတတ်ကြပါတယ်။ ဆဝါးပေမယ်လို့လည်း အဲသလိုမျိုး ဆဝါးပြီး အားပေးတဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ “စေတနာကောင်း” လုို့ ခေါ်မယ်ဆိုလည်း ကျွန်တော်တို့ ခေါ်ဖို့ သင့်ပါသည်။
အနာဂါတ် သီလစံထားဝါဒ ဟာ လူတစ်ဦးဟာ မတရားမှုကို ခံစားလာရသလောက် လွတ်ရာလွတ်ကြောင်းကို ပစ္စုပ္ဗန် မျက်မှောက်မှာ ချက်ချင်း ရှာမတွေ့နိုင်တဲ့ အခါမှာ ပေါ်လာတဲ့ ပုံမှန် အတွေးဖြစ်စဉ် တစ်ခုလို့လည်း ဆိုနိုင်ပါသည်။ တကယ်တော့လည်း “ဓမ္မသည် အဓမ္မကို အဆုံးသတ်မှာ အောင်နိုင်စမြဲ” ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဗမာလူ့ဘောင်နဲ့ ရင်းနှီးပြီး ဖြစ်တဲ့ အတွေးဟာ သီလစံထား အနာဂါတ် ဝါဒ ကိုယ်တိုင် ရဲ့ အခြေခံ အနုမာန ပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ သည်စာကြောင်း ရဲ့ သဘောသဘာဝကို သေချာရေရာ နားလည်လာအောင် သရုပ်ခွဲကြည့်ကြပါစို့။ သည်လို စူးစမ်းရင်းကနေ အနာဂါတ် သီလစံထားဝါဒ ဟာ ဘာကြောင့် ကလောက်တောင် အန္တရယ်ကြီးနေရသလဲ ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ အသိအမှတ်ပြုလာရပါ လိမ့်မည်။
“ဓမ္မသည် အဓမ္မ ကို အောင်နိုင်စမြဲ” လို့ ပြောကြတဲ့ အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ထားတဲ့ သဘောသဘာဝမှာ
“တရားမျှတမှု ဘက်တော်သားသည် တရားမမျှတမှု ဘက်တော်သား ကို နောက်ဆုံးတွင် အနိုင်ရစမြဲ ဖြစ်သည်”
သည်မှာ ပြဿနာ အကြီးအကျယ် ရှိလာတာက ‘တရားမျှတမှု’ နဲ့ ‘တရားမမျှတမှု’ ကို ဘယ်သူက ဆုံးဖြတ်မှာလဲ ဆိုတာကိုပါ။ ဒါ့ထက်ဆိုးတဲ့ ပြဿနာက “အနိုင်ရခြင်း ဆိုတာ မလွဲမသွေ ဖြစ်လိမ့်မယ်”လို့ သည်နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ ယူဆထားကြတာ ဖြစ်ပြီး ဒါ့ထက်မကဆိုးတဲ့ ပြဿနာက “အနိုင်ရသူ နဲ့ တရားမျှတ မှန်ကန်သူ” ကို ထပ်တူပြုထားခြင်း ဖြစ်က၊ နောက်ဆုံး နဲ့အဆိုးဆုံး ပြဿနာကတော့ “အနိုင်ရတဲ့ အုပ်စု ဟာ တရားမျှတ မှန်ကန်တဲ့ အုပ်စုနဲ့ အတူတူပဲ” လို့ သတ်မှတ်မိခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဟုတ်ပါပြီ၊ လောကဖြစ်စဉ်တို့သည် တရားမျှတမှု၏ ဘက်တော်သားတို့ မှ တရားမမျှတသူတို့ကို နောက်ဆုံးတွင် အောင်ပွဲခံ အနိုင်ရ ခွန်အားရှိလာခြင်း နှင့် အဆုံးသတ်ရပါမည်။ ခက်သည်မှာ နင်တို့ ပြောသည့်စကား ငါ့အာရုံတွင် အနက်ပေါ်လွင်လာသည်မှာ
“အောင်ပွဲခံ အနိုင်ရ ခွန်အားရှိ အာဏာလက်ဝယ်ရလာသူတို့သည် တရားမျှတမှု၏ ဘက်တော်သားတို့ ဖြစ်သည်”
ဒါ မှန်ပါသလား။ တကယ်တော့ “ဓမ္မသည် အဓမ္မကို အဆုံးသတ်မှာ အောင်နိုင်စမြဲ” ဟု ကျွန်တော်တို့ မသိသား သုံးစွဲပြောဆိုကြသလောက် သေချာသုံးသပ်ကြည့်ရင် ဒါဟာ လုံးလုံးမှားနေတဲ့ အယူအစွဲတစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့ ဆုပ်ကိုင်နေမိတယ် ဆိုတာကို သဘောပေါက်နိုင် ပါသည်။
ပိုပြီး ရှင်းလင်းသွားအောင် ဝါကျကလေးတွေ ကျွန်တော်တုို့ ဆက်ရေးကြည့်ကြ ရအောင်။
“မင်းတုန်းမင်းသည် ပုဂံမင်းကို အောင်နိုင်ခဲ့သည်။ မင်းတုန်းမင်းသည် တရားမျှတမှု ဘက်တော်သား ဖြစ်သည်”
ဟုတ်သလိုလို ပါပဲ။ မင်းတုန်းမင်းဆိုတာ ပဉ္စမ သင်္ဂါယနာတင် မင်းတရားကြီးလေ။ ပုဂံမင်းဆိုတာ ဖတ်စာအုပ်ထဲပါတဲ့ အတိုင်းဆို တော်တော်ဆိုးတာပေါ့နော်။
“ဗိုလ်နေဝင်းသည် ဦးနုကို အောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ဗိုလ်နေဝင်းသည် တရားမျှတမှု ဘက်တော်သား ဖြစ်သည်”
“ဗိုလ်ခင်ညွန့်သည် တော်လှန်ရေးသမားတွေကို အောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ဗိုလ်ခင်ညွန့်သည် တရားမျှတမှု ဘက်တော်သား ဖြစ်သည်”
“ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးသမားတို့သည် လူဝီဘုရင်ကို အောင်နိုင်ခဲ့၍ ခေါင်းဖြတ်စက်ပေါ်တင်၍ ခေါင်းဖြတ်လိုက်သည်။ ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးသမား တို့သည် တရားမျှတမှု ဘက်တော်သား ဖြစ်သည်”
“ဖက်ဆစ်ဂျပန်တို့သည် အင်္ဂလိပ်တို့ကို အောင်နိုင်ခဲ့သည် ။ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တို့သည် တရားမျှတမှု ဘက်တော်သား ဖြစ်သည်” “ ဗမာတို့သည် အင်္ဂလိပ်တို့ကုို အောင်နိုင်ခဲ့သည် ။ ဗမာတို့သည် တရားမျှတမှု ဘက်တော်သား ဖြစ်သည်”
“ဗမာ စစ်တပ်သည် မွန်စစ်တပ်ကို အောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ဗမာစစ်သည်တော်တို့သည် တရားမျှတမှု ဘက်တော်သား ဖြစ်သည်”
သည်ဝါကျတွေ အားလုံးမှာ ငါတုို့ သင်ခန်းစာ ယူစရာ ရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် အတိတ်မှာ ဗမာအုပ်စုက မွန်ကို အောင်နိုင်လို့ ဗမာအုပ်စုဟာ တရားမျှတတဲ့ အုပ်စုလို့ ဆိုပါရင် ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားလို့ မွန်အုပ်စုက ဗမာအုပ်စုကို နိုင်ခဲ့ရင်လည်း မွန်တွေဟာ တရားမျှတသူလုို့ ငါတို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါသည်။ စင်စစ် တရားမျှတခြင်း တရားမမျှတခြင်းကို အောင်ပွဲရရှိမှု နှင့် တိုင်းတာနေခြင်းဟာ ဘယ်လိုမှ အဓိပ္ဗာယ် မရှိနို်င်ပါ။
ဒါမျိုး တရားမျှတမှု ဆိုတာကို အောင်ပွဲရရှိ လွှမ်းမိုးနိုင်မှု နဲ့ ထပ်တူပြုပြီး မြင်နေတာဟာ အင်မတန် အန္တရယ် ကြီးမားလှတဲ့ “အာဏာကို ကိုးကွယ်ကော်ရော်မှု” ဖြစ်ပါတယ်။ ဗမာစကားမှာ “တရားတဖက် ဓားတစ်လက်” ဆိုပြီး ဖြစ်ထွန်းတာဟာ တရား နဲ့ ဓား (ဓား = အာဏာ၊ သူတစ်ပါးကို နှိပ်စက်နိုင်မှု၊ ခြိမ်းခြောက်နိုင်မှု၊ အကြပ်ကိုင်နိုင်မှု) ကို ထပ်တူပြုပြီး မြင်နေရာက ဖြစ်ပေါ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့လည်း တရားတစ်ဖက် ဓားတစ်လက် ဆိုတာ ခပ်ရိုးရိုး ဓမ္မတာ ဆောင်ပုဒ်တစ်ခု လို့သာ ထင်ရတာ ၊ အာဏာကို တရားမျှတမှု လို့ မိုက်မဲစွာ မြင်နေတဲ့ လူယုတ်မာတွေကသာ သည်ဆောင်ပုဒ်မျိုးကို ကိုင်စွဲကျင့်သုံးလိမ့်မယ်ဆိုတာ ငါတို့ ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်နိုင် ပါသည်။
ထို့ကြောင့်လည်း ကျွန်တော် အကြံပြုလိုသည်မှာ “နောက်ပိတ်ဆုံး ငါတို့နုိုင်တယ်ဆုို ပြီးတာပါပဲ။ အဆုံးသတ်မှာ အနိုင်ရ အောင်ပွဲခံသွား လိမ့်မှာ ဖြစ်တဲ့ ငါတို့ဟာ တရားမျှတသူတို့ ဖြစ်သည်” ဆိုတဲ့ ဝါဒဟာ လူ့ဘောင်တစ်ခုက လက်မခံဘဲ လုံးဝ ပယ်ချရမည့် ဝါဒ ဖြစ်ပါသည်။ အင်မတန် ရှင်းပါသည်။ ဒါကို မပယ်ချနိုင်ဘူးဆိုလျှင် ဤဝါဒကို ကိုးကွယ်သူ မိစ္ဆာ ပညာရှင်တွေဟာ မည်သို့သော အကြောင်းပြချက်တွေကို ပြုလုပ်လာမလဲဆို
“တရားမျှတမှု ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားနေဖို့ မလိုပါ။ နိုင်အောင် လုပ်ဖို့ပဲ လုပ်ပါသည်။ ခွန်အားရှိအောင် လုပ်ဖို့ပဲ လုိုပါသည်။ လွှမ်းမိုးအုပ်စီးနိုင်အောင် လုပ်ဖို့ပဲ လုိုပါသည်။ သေဝပ်စေမည့် အာဏာကို ရယူနုိုင်ဖို့ပဲလိုပါသည်။ ငါတို့ နိုင်ပြီ၊ ခွန်အားရှိပြီ၊လွှမ်းမိုးနိုင်ပြီ၊ အာဏာရှိပြီ ဆိုရင် လူ့ဘောင်တစ်ခုလုံး တရားမျှတပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့် နိုင်အောင်လုပ်တာ၊ ခွန်အားရှိအောင် လုပ်တာ၊ လွှမ်းမိုးနိုင်အောင် လုပ်တာ မှန်သမျှသည် နောက်ဆုံးသတ်မှာ အကောင်းဆုံး တရားမျှတမှု လူ့ဘောင်တွင် ဖြစ်ထွန်းလာစေရေး အတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေသည့် အလုပ်များသာ ဖြစ်သည့် အတွက် ငါတို့သည် တရားမျှတသော အလုပ်ကို လုပ်နေသူများသာ ဖြစ်ပါသည်”
ဝီရသူ၊ အင်းစိန်ရွာမ၊ ရွှေညဝါ၊ သီတဂူ၊ မျိုးစောင့်ဘုန်းကြီး ၊ ဝံသပါလ ဘုန်းကြီးတွေဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး တော်လှန်ရေးသမားတွေလား ၊ အနာဂါတ်မျှော် မိစ္ဆာတွေလား ဆိုတာကို ပရိသတ်များဘာသာ အကဲဖြတ်ကြပါ။ ဗုဒ္ဓရဲ့ သားတော် ငြိမ်းချမ်းရေးသမား ရဟန်းသံဃာများလား ၊ လူစွမ်းကောင်း ဝါဒ ကိုးကွယ်တဲ့ ဒေဝဒတ်ရဲ့ အာဏာရူးဝိဥာဉ် တောမသတ်အောင် ပူးဝင်နေတဲ့ ပါရာဇိကကျပြီး သင်္ကန်းဝတ်ထားသူများလား ဆိုတာကို ပရိသတ်များ ဘာသာ ဆုံးဖြတ်ကြပါ။ အမျိုးဇာတိကို တရားဓမ္မထက် မြတ်နိုးပုံရတဲ့ ဘုန်းကြီးလုပ်စားအဖွဲ့ ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်တွေဟာ ဗုဒ္ဓစာပေကျမ်းဂန်ကို အမှန်တကယ် နားလည်ကျွမ်းကျင် ပိုင်နိုင်တဲ့ ကျမ်းတတ်ပေတတ် ဆရာတော် ပညာရှိ တွေလား၊ ဘုရားစာတွေ အလွတ်ရွတ်ပြီး စိတ်ထဲမှာ တောင်စဉ်ရေမရ ပေါ်တဲ့ ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မှုတွေကို ‘တရား’ ဆုိုပြီး လုပ်နေတဲ့ အယောင်ဆောင် လူမိုက်တွေလား ဆိုတာ ပရိသတ်များ ဘာသာ ဆုံးဖြတ်ကြပါ။
အာဏာရှိတဲ့ မောင်သိန်းစိန်က ဝီရသူကို ‘ငြိမ်းချမ်းရေးသမား’ လို့ ထောက်ခံပေးတိုင်း ဝီရသူ ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးသမားဆိုတဲ့ ဂုဏ်ကို စံစားခွင့်မရှိပါ။ သည်လိုပဲ စစ်အစိုးရ ရဲ့ လက်အောက်ခံ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ဘွဲ့ပေးအဖွဲ့က သီတဂူကို ‘စာပေပါရဂူဘွဲ့’ ကပ်လုို့လည်း သီတဂူဟာ စာပေပါရဂူ မဖြစ်ပါ။ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ဟားဗတ် တက္ကသိုလ်က ယောင်မှားပြီး လာကပ်ရင်လည်း (ဒါဟာလည်း အတော်ကို ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိခဲ့ဖူးပါသည်) အဲသလို ကပ်ရုံနဲ့ သီတဂူဟာ ဘယ်လိုမှ စာပေပါရဂူ မဖြစ်ပါ။
တကယ်ပြောမယ်ဆို တရားဓမ္မသာ ပဓာန ဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကျင့်ကြံရမယ့် သံဃာကို အာဏာရှင်တွေက ဘွဲ့တွေ ဂုဏ်ထူးတွေ ချီးမြှင့်ပြနေတာဟာ (‘ဆက်ကပ်တာ’ မဟုတ်ပါ) အာဏာက ဗုဒ္ဓတရားရဲ့ အထက်မှာ လာပြီးနေတဲ့ သဘောပါ။ တကယ်ပြောမယ်ဆိုရင် ဒါမျိုး သာသနာကုို ချီးမြှောက်ပါတယ်ဆိုပြီး အာဏာရှင်တွေက ဘွဲ့တွေ ဂုဏ်ထူးတွေ ဆက်ကပ်နေခြင်းဟာ ဗုဒ္ဓရှင်တော်ကို အရှက်ခွဲနေခြင်း ၊ တရားဓမ္မကို ခြေထောက်အောက်မှာ ထားဖုို့ကြိုးစားခြင်း၊ သံဃာကို ထိပ်ခေါက် စော်ကားခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာတော် သံဃာတော်များ သတိထား ဆင်ခြင်တော်မူပါ။ ဘွဲ့ပေးတယ်ဆိုတာဟာ ဆရာသမားက တပည့်ကို နင့်မှာ ပညာပြည့်စုံပြီ ဆိုပြီး အကဲဖြတ် အသိအမှတ်ပြုပြီး ဘွဲ့ပေးတာပါ။ ဆရာတော် ဘွဲ့ရမရကို ဆုံးဖြတ်မယ့် စစ်အာဏာရှင်တွေ နဲ့ စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ ကျွန်အမှုထမ်းတွေဟာ ဆရာတော့်မှာ တရားဓမ္မ (ဘုရားပေးတဲ့ ပညာ) နဲ့ ပြည့်စုံပါပြီလို့ ဆုံးဖြတ်နိုင်လောက်တဲ့ ဥာဏ်အရည်အသွေး စိုးစဉ်းမျှပင် ရှိပါသလား။ သူတုို့ဟာ ဆရာတော် သံဃာတော်တွေကို ဘွဲ့ပေးရလောက်အောင် ဆရာတော် သံဃာတော်တို့ရဲ့ အထက်က ဆရာသမားတွေလား။
မဟာ ပရိနိဗ္ဗာန သုတ်တွင် ဗုဒ္ဓ နောက်ဆုံး အထင်အရှား မှာကြားခဲ့သည့် အတိုင်း ဗုဒ္ဓသာသာနာ "အစဉ်အလာ" တွင် ဗုဒ္ဓ မျက်ကွယ်ပြုပြီးနောက် ဆရာသမားဟူသည် ဓမ္မဝိနယ သာလျှင် ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရား မျက်မှောက်ထင်ရှား ရှိချိန်မှ လွဲ၍ ကျန်ခေတ်တို့တွင် ရဟန်းသံဃာသည် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး (သို့) တစ်ပါးသော ရဟန်းကို ဆရာတင်ခွင့် လုံးဝမရှိပါ။ ဥပမာအားဖြင့် သီတဂူကျောင်းတွင် ပညာသင်ယူနေသော အရှင်သူမြတ်တို့ အတွက် “ဆရာသမားဟူသည် ကျောင်းပိုင် သီတဂူ ဆရာတော်ကြီး ပဲ” ဟု ယူဆလျှင် ဒါဟာ လုံးဝကို မှားယွင်းသော အယူဖြစ်၍ ဒါဟာ ဘုရား အသေအချာ မိန့်မှာခဲ့သော တရားဓမ္မလမ်းစဉ်မှ ချွတ်ချော်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မြတ်စွာဘုရားသည် နောင်လာနောင်သား ရဟန်းတို့ကို သူ့ လက်ထက်တော်ခေတ်မှာကဲ့သို့ ဆရာတင်ခွင့် ပေးမထားရခြင်း အာဘော်၏ အကြောင်းရင်းမှာလည်း ရှင်းလင်းလွန်းပါသည်။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ဒါမျိုး ပုဂ္ဂိုလ်(ဝါ)ရဟန်းကို ဆရာတင်ခွင့် ပေးလိုက်ပါလျှင် ရဟန်းသံဃာသည် တရားကို မကိုးကွယ်ဘဲ ကျောင်းဆွမ်း စသော ခွန်အားရှိသူ၊ ကျော်စောသူ၊ ပရိသတ် အခြံအရံများသူကို ကိုးကွယ်တာ ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။ တရားဓမ္မကို ကိုးကွယ်တာထက် အာဏာ ခွန်အားရှိသော ရဟန်းကို ကိုးကွယ်တာမျိုး ဖြစ်လာပါမည်။ တရားဓမ္မမှ ပေးသည့် ဘဝအမြင်ကို ရှာကြံဖုိ့ မကြိုးစားဘဲ အာဏာခွန်အားရှိသူက စံသတ်ဆုံးဖြတ်သည့် ဘဝအမြင်တွေကို ရဟန်းသံဃာသည် အမှန်တရားလို့ ယူဆလာတာမျိုး ဖြစ်လာပါမည်။ အာဏာနောက်လိုက် ဖြစ်နေသည့် ရဟန်းသံဃာတို့သည် ဆရာဖြစ်သူ (အာဏာခွန်အားရှိသူ) က ဒါကတော့ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သည်ဟု ပြောလျှင် ဒါဟာ တရားဓမ္မ၊ ဝိနယ နဲ့ ညီညွတ်သလား၊ မညီညွတ်သလား မိမိကိုယ်ပိုင် တရားအသိနှင့် မစဉ်းစားတတ်တော့ဘဲ ပြောသမျှ လိုက်လုပ်သည့် စက်ရုပ်တွေ အကုန်လုံး ဖြစ်လာပါမည်။ အာဏာရူးတွေ၊ အာဏာနောက်လိုက်တွေ၊ ထမင်းစားကျွန်တွေ၊ ကျာပွတ်ကို်င်တွေ၊ ဆရာတွေ၊ တပည့်တွေ၊ စက်ရုပ်တွေ၊ အသင်းအပင်း အဆက်အနွယ်တွေ စုဝေးနေသော ဘုန်းကြီးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာ ဘုရားရှင် လိုလားခဲ့သော တောင်ပံရှိသော ဌက်ကဲ့သို့ လွတ်လပ်သည့် “မိမိကိုယ်သာ ကိုးကွယ်ရာ” သံဃာအဖွဲ့မျိုး မဟုတ်တာတော့ သေချာပါသည်။
ရဟန်း၏ အဓိပ္ဗာယ်မှာ အတောင်ရှိသည့် လွတ်လပ်သော ဌက် (ရဟတ်) ဖြစ်သည်။ နေရာတစ်ခုတွင် ချုပ်နှောင်မခံရဘဲ တစ်နေရာမှ တစ်နေရာ၊ တစ်ရွာမှ တစ်ရွာ လွတ်လပ်စွာ သွားလာနိုင်၍ ရဟန်းဟု ခေါ်ပါသည် ။ ဗုဒ္ဓသည် မလွတ်လပ်သော၊ အာဏာတစ်ခုကို မှီတွယ်နေရသော သံဃာ အဖွဲ့အစည်းမျိုး ကို မလိုလားပါ။ နိုင်ငံတော်ဆိုသော ရှင်ဘုရင်တွေက ထမင်းကျွေးထားသဖြင့် ရှင်ဘုရင်ကို ထမင်းရှင် အဖြစ် မှော်ကြည့်နေရသော “ကျွန်နှင့်တူသော ရဟန်း” ကို မလိုလားပါ။ “အိမ်စဉ်လှည့် ဆွမ်းခံရန်”၊ “တစ်အိမ်က တစ်ဇွန်းမျှ ရလျှင် ရောင့်ရဲ၍ နောက်တစ်အိမ်သို့ သွားရန်”၊ အထူးသဖြင့် “မိသားစုတို့က မိမိအား အမြဲပင် ဆွမ်းကွမ်းထောက်ပံ့နေသည် ဖြစ်ပစေ မမြင်ဘူးသော တစိမ်းကဲ့သို့သာ ဆက်ဆံရန်” စသည့် ဗုဒ္ဓ၏ အမှာစကားတို့သည် တကယ်တော့ အသက်မွေးမှုဟူသော အကြောင်းကြောင့် မိမိ၏ ကိုယ်ကျင့်တရားထက် ခွန်အားအာဏာရှိသူကို သွားမကိုးကွယ်မိစေရန် ရည်ရွယ်ထားခြင်း ပါတည်း။
“တရားသူသည် မတရားသူ ကို နောက်ဆုံးမှာ အောင်နုိုင်စမြဲ ” ဆိုတဲ့ သီလစံထား အနာဂါတ် ဝါဒ ဟာ သီလသမာဆိုတာကို စစ်နိုင်တဲ့သူ၊ ခွန်အားရှိသူ၊ လက်ဝယ် အာဏာရှိသူ က ဆုံးဖြတ်တာကို ခံရစေ ပါတယ်။ မိမိ၏ ကိုယ်ကျင့်တရားသာလျှင် မိမိ၏ လမ်းပြရာ မီးအိမ်အဖြစ် ဆုပ်ကိုင်ထားကြသည့် ရဟန်းသံဃာတို့ အတွက် ဒါမျိုး အနိုင်ရ (ဝါ) အာဏာ အသာစီးရတဲ့ အုပ်စုတစ်စုကနေ မိမိ၏ သီလသမာကို လာဆုံးဖြတ်တာကို လက်ခံနိုင်စရာ မရှိပါ။ ရဟန်းသံဃာတင် မဟုတ်ပါဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ အရပ်ဘက် လူ့ဘောင်သည်လည်း သီလသမာ၏ စံသတ်မှတ်ချက် ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုး ဖြစ်ရမည်ဟု အာဏာ အသာစီး ရနေတဲ့ အုပ်စုတစ်စု ကနေ လာဆုံးဖြတ်တာကို ဘယ်လိုမှ လက်ခံနိုင်စရာ မရှိပါ။
‘နိုင်ငံတော် (အာဏာပို်င် အဖွဲ့) ရဲ့ သီလသမာစံ’ ဆိုတာ လူ့ကျင့်ဝတ်စံ အမှန်တရား မဟုတ်ပါ။ ‘တပ်မတော် (စစ်တပ်) ရဲ့ သီလသမာစံ’ ဆိုတာ လူ့ကျင့်ဝတ်စံ အမှန်တရား မဟုတ်ပါ။ သီးသန့် အကျိုးမျှော်တဲ့ အုပ်စုတစ်စုက သတ်မှတ်ယုံကြည်တဲ့ သီလသမာစံ ဆိုတာ လူ့ကျင့်ဝတ်စံ အမှန်တရား မဟုတ်ပါ။
ထို့နှင်နည်းတူ ‘ဗမာ လူမျိုး’ ရဲ့ သီလသမာစံ ဆိုတာ လူ့ဘောင်တစ်ခု၏ သီလသမာစံ နောက်ဆုံး အမှန်တရား မဟုတ်ပါ။ ‘ဗုဒ္ဓဘာသာ’ ရဲ့ သီလသမာစံ ဆိုတာဟာလည်း လူ့ဘောင်တစ်ခု၏ သီလသမာစံ နောက်ဆုံး အမှန်တရား မဟုတ်ပါ။ ‘ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ’ ရဲ့ သီလသမာစံ ဆိုတာဟာလည်း လူ့ဘောင်တစ်ခု၏ သီလသမာစံ နောက်ဆုံး အမှန်တရား မဟုတ်ပါ။ သေချာအောင် ပြောပါမည်၊ ပစ္စုပ္ဗန် ရဲ့ သီလသမာစံ၊ ပစ္စက္ခ အမှန်တရားလည်း မဟုတ်ပါ။
ကျွန်တော်တို့သည် “ငါတို့၏ အနာဂါတ်လူ့ဘောင်သည် အကောင်းဆုံး ဗြဟ္မစိုရ် တရားတွေနဲ့ ရွှန်းဝေပြည့်စုံနေတဲ့ လူ့ဘောင်ကြီး ဖြစ်ဖို့ပဲ အရေးကြီးတယ်” ဟူသည့် သီလစံထား အနာဂါတ် ဝါဒကို စွဲယူပြီး လူ့ဘောင်ကို တည်ဆောက်ခဲ့ပါလျှင် လက်တွေ့တွင် ကျွန်တော်တို့သည် “အာဏာကို ကိုးကွယ်ကော်ရော်နေသော လူ့ဘောင်” ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။ အာဏာကို ကိုးကွယ်ကော်ရော်မှု နှင့်အတူ ဆက်ပြီး မလွဲမသွေ ဖြစ်လာလိမ့်မည်မှာကား ၄င်းလူ့ဘောင်သည် “စစ်သွေးကြွ လူ့ဘောင်” လုံးလုံး ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။ “စစ်သွေးကြွ လူ့ဘောင်” လုံးလုံး ဖြစ်လာသော နိုင်ငံသည် စစ်သား၏ သီလသမာ၊ စစ်သား၏ လောကအမြင်၊ စစ်သား၏ ရာထူးအာဏာဂုဏ်ဒြပ် ရယူမှုတို့ကို မွန်မြတ်တင့်တယ် အတည်ဖြစ်သော “အမှန်တရား” အဖြစ် ချွတ်မရအောင် စွဲယူနေသည့် “ဇာတ် နုိုင်ငံတော်ကြီး” ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။ မြောက်ကိုးရီးယား စစ်အာဏာရှင်တို့က ဆွေသုံးဆက် မျိုးသုံးဆက် ထောင်ဒဏ်အပြစ်ပေးခံရတာထက် ဆိုးတဲ့ “စစ်သွေးအာဏာ သမိုင်းစဉ်လာ” ထောင်ကြီးတွင် ဆွေဆက်တစ်ထောင် မျိုးဆက်တစ်ထောင် မလွတ်တမ်း ခံရမယ့် ဘဝကို ကျရောက်သွားပါလိမ့်မည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စစ်သွေးသည် သူ့ခေတ် သူ့အခါတုန်းက သူကိုယ်တိုင် သမိုင်းကို လိမ်ခဲ့သူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဘုရားခေတ်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စစ်သွေး နှင့် မော်ဒန် ဗမာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ ကွာခြားပုံက သမိုင်းလိမ်ဆိုတဲ့ အကျဉ်းထောင်ဆိုးကြီးထဲမှာ တစ်သက်လုံး မျိုးရိုးစဉ်ဆက် ခံခဲ့ရတဲ့ အရူံးသမားဘဝက လွတ်လာလို့ ဆိုပြီး ဘုရားရှေ့မှာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဝန်ခံပြီး လာငိုတဲ့ ဗမာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ရယ်လို့ ခုချိန်ထိ မရှိသေးတာ ပါပဲ။ ဟုတ်ကဲ့၊ အဲသလို စွန့်စားဖောက်ထွက် တစ်ဘဝလုံး အရူံးသမား ဖြစ်ခဲ့ရတာကို ဝန်ခံပြီး သတ္တိရှိရှိ လာငိုတဲ့ ဗမာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကိုစစ်သွေး တွေ ရှိလာပြီ ဆိုရင် ဗမာပြည်သည် စစ်အာဏာရှင် လက်အောက်က လွတ်မြောက်ဖို့ ထွက်ရပ်လမ်းကို ကျွန်တော်တို့ မြင်ရပါပြီဟု ...။
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 4:21 PM
ဒီမိုကရေစီစနစ် မှာ ပြည်သူအများစုက တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင် ဖြစ်စေချင်တဲ.သူဟာ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်ကိုဖြစ်ရပါမယ် ။ အဲလိုမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင် ဒီမိုကရေစီစနစ် ကျင်.သုံးတာမဟုတ်တဲ. အပြင် ပြည်သူတွေရဲ. အင်အားထက် မတရား (လက်နက်အားကိုး)လွှမ်းမိုးထားတဲ. အင်အားစုက ကြီးထွားနေလို.ဘဲ ။
ညိုထွန်း တစ်ယောက် ကိုယ်တိုင်၊ ကိုယ့်ပမာဏကို ကိုယ်သိပါပြီ ဟု စေတီပုထိုးနားကခြင်္သေ့ကြီးရှေ့မှာ သတ္တိရှိရှိဝန်ခံရဲတဲ့ နေ့ဟာ မောင်ညိုထွန်းမြင်ချင်တဲ့ လမ်း ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါလိမ့်မည်။ မဟုတ်သေးရင်တော့ ကိုယ်ထင်ရာ ကိုယ်စိုင်းနေကြတဲ့ လောကကြီးထဲမှာ ကိုယ်ထင်ရာကို ပြောမိ ရေးမိနေဦးမှာပဲ … အဲ ၊ ကိုယ့်ပယောဂ မကင်းသေးသ၍ တော့ ဘယ်အောက်ကမှ လွတ်မြောက်နိုင်မှာ မဟုတ်သေးဘူး……